Toro teknika - Mika Pipeline Technology Co., Ltd.
Ny fanenan'ny vatolampy
Ny ankamaroan'ny clamp dia vita amin'ny mari-pahaizana samihafa amin'ny vy stainless. Matetika ny mpanjifa dia mampiasa magneto mba hamantarana ny kalitaon'ilay fitaovana. Raha misy magnetisma, dia tsy tsara ny fitaovana. Raha ny marina, ny mifanohitra amin'izany no marina. Ny magneto dia midika fa ny matotra akora dia manana fahatsapana mahery sy avo lenta. . Satria ny fifangaroana vita amin'izao fotoana izao dia vita amin'ny vy stainless austenitika toy ny 201, 301, 304, ary 316, aorian'ny fitsaboana ny hafanana, ny akora akora dia afaka manjary tsy misy masira tanteraka, fa ny akora kosa ampiasaina hamoahana ny clamp dia tsy maintsy mihaona ny hamafiny. sy ny tanjaky ny vokatra mitongilana. , Koa ny hamafin'ny fahasosorana sy ny tanjaka hafahafa ihany no afaka mihaona amin'ny alàlan'ny fizahana mangatsiaka, izay mitaky ny lamba malefaka natorahana azy anaty tsipika mangatsiaka tsy misaraka. Rehefa avy mitete-mangatsiaka izy ireo dia tena hihamatanjaka ary hamokatra saha magnetika.
Ny andraikitry ny sako-molotra
Amin`izao fotoana izao, ny soson`ny galvanized teo ambonin`ny fametahana vy vita amin`ny karbonika dia manana anjara asa lubricating. Ny ankamaroan'ny kiraro vy amin'ny fametahana DIN3017 dia misy koa goavambe, izay afaka mandray anjara amin'ny lubricating. Raha tsy mila plastika zinc ianao, dia mila sisan-savon-javamaniry toy ny fanisan-damba. Amin'ny fotoana rehetra, ho maina ny mololo savoka, ny mari-pana mandritra ny fitaterana na ny tontolo henjana no hiteraka fatiantoka, noho izany dia hidina ny fandevenana, noho izany dia manoroana fa misy ny galona vy.
Clamp T-bolt amin'ny lohataona
Ny clamp T-bolt miaraka amin'ny lohataona dia matetika ampiasaina ao anaty coolant kamiao matevina ary mandoa rafitra an'habakabaka. Ny tanjon'ny lohataona dia ny fanelanelanana sy fanitarana ny fifandraisana hose. Noho izany, rehefa mametraka ity takelaka ity ianao dia tsy maintsy mandinika tsara amin'ny faran'ny lohataona dia tsy afaka mihintsana tanteraka. Raha misy olana roa tena at in amin'ny farany: ny iray dia ny faran'ny lohataona very ny fiasan'ny fanelanelanana sy famitrandrahana solika ary lasa spacer mafy; na dia mety hihena aza izany, tsy misy fomba azo ampiharina amin'ny fanitarana ny hafanana sy ny fanenerana. Ny faharoa dia ny fanafana ny rafi-pandehanana, ny hose dia hanana tsindry haingana be loatra, manimba ny fantsona fantsom-pifika, ary mampihena be ny ain'ny serivisy amin'ny rafi-pandehanana.